व्यवहारमै हेपाहा प्रवृत्ति, लोकतन्त्रको बदनामी - राष्ट्रखबर
मनोरन्जन व्यवहारमै हेपाहा प्रवृत्ति, लोकतन्त्रको बदनामी
अहिले नेपालको राजनीतिमा युवा पुस्ताहरु त्यति आर्कषित भएको देखिदैन । बिगतमा युवाहरु जति राजनीतिमा सक्रिय थिए अहिले त्यस्तो सक्रिय छैनन् । यो बिषयमा बहस गर्नु पर्ने जरुरी देखिएको छ । देशमा लोकतन्त्र छ । तर लोकतन्त्रको अभ्यास भएको छ की छैन । हामीले लोकतन्त्रको अभ्यास कति गरेका छौ । आज तानाशाह प्रबृतिका मान्छेहरु पनि आफू लोकतन्त्रवादी भएको दाबी गरिराखेका छन् । तर, व्यवहारमा लोकतन्त्रवादी संस्कार कतै देखिदैन । यहानिर समस्या छ ।
लोकतन्त्रको नाममा बदनाम गर्नेहरुको जमात धेरै छ । तिनीहरुलाई समयमै चिन्न जरुरी छ । विश्वमा तानाशाहहरू पतन भइरहेका छन । गैरलोकतान्त्रिक तरिकाले शासनसत्ता सञ्चालन गर्नेहरू नेपालमा पनि पतन हुन्छन । बिगतमा पनि भएकै हुन । जनताका पक्षमा काम गर्नेहरु नै लोकप्रिय हुने हुन । जसले जनताको पक्षमा काम गदैनन् उनीहरु आफै पतन हुन्छन ।
देश र जनताका लागि रात दिन खटेर काम गरिरहेका राजनीतिक दल र तिनका नेताहरु नै जनताका प्रिय हुन्छन । उनैले नै जनताको मन जित्ने हो । कुरा गरेर मात्र हुदैन ब्यवहारमा पनि लागु हुनु पर्छ । जनताको पक्षमा काम गर्ने राजनीतिक दल र तिनका नेताहरु कहिल्लै पराजित हुदैनन् । लोकतन्त्र भनेको प्रतिस्प्रधात्मक राजनीतिक प्रणाली हो । आफूलाई लोकतन्त्रवादी भन्नेहरु अब गम्भिर हुनु पर्ने बेला आएको छ । यो ब्यवस्था भनेको प्रतिस्पर्धाको ब्यवस्था हो । सैद्धान्तिक हिसाबले लोकतन्त्रात्मक शासन सञ्चालन भइराखेका मुलुकमा पनि पूर्ण लोकतान्त्रिक अभ्यास हुन सकेको छैन । लोकतन्त्र जनताकेन्द्र्रित शासन विधि हो । यसको सुदृढीकरण हुन जरुरी छ । शासकीय प्रक्रियाका हरेक चरणमा सर्वसाधारणको प्रत्यक्ष संलग्नता र सहभागिता अहिलेको आबश्यकता हो ।
समाजमा रहेका टाठाबाठा कुलीनवर्गले मात्र लोकतन्त्रको फाइदा लिइरहेका छन । यो नै दुखद पक्ष हो । राजनीतिक परिवर्तन पछि पनि कुलिनवर्गकै नियन्त्रणमा देशको शासन परिचालित हुँदै गएको अवस्था देखियो । व्यवहारमै हेपाहा प्रवृत्ति बढ्दै गयो । वेलाबखत भड्किने हिंसाले लोकतन्त्रको बदनामी हुँदै गयो । व्यक्तिको स्वतन्त्रतामाथि हस्तछेपको अवस्था देखिन थाल्यो ।सत्तामा रहनेहरूले जनताको पिरमर्का बुझन सकेनन् । ठूलो आवाजलाई मात्र सम्बोधन गर्ने प्रवृत्ति देखियो ।
लोकतन्त्रको अभ्यास गर्नु राम्रो कुरा हो । लोकतन्त्रको नाममा बिकृत गर्नु भने राम्रो कुरा होइन । त्यसैले लामो समयदेखि पछि पारिएका या परेका समूह, क्षेत्र, वर्ग र समुदाय पहिचान गरी उनीहरूको सही तवरले उत्थान गरिँदा मात्र लोकतन्त्र विवादरहित रहनेछ । देशलाई संघीय, गणतन्त्रात्मक र धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रमा परिणत गर्दासमेत प्रत्यक्ष लोकतन्त्रको अभ्यास गरिएन । त्यसैले नेपालमा व्यवहारमा लोकतन्त्रको अनुभूति जनताले गर्न पाएका छैनन् ।
आफ्ना प्रतिनिधिलाई ठिक दिशामा अभिमुख गराउने र जनताप्रति जवाफदेही बनाउने प्रक्रियाको थालनी अझै हुन सकेको छैन । यसमा जननिर्वाचित प्रतिनिधिले जनताप्रति पूर्णरूपमा समर्पित रही जवाफदेहीता बहन गर्नुपर्ने जरुरी छ । नेपालमा जनताले व्यवहारमा लोकतन्त्रको अनुभव गर्न पाएका छैनन् । देशलाई संघीय, गणतन्त्रात्मक र धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रमा परिणत गर्दासमेत प्रत्यक्ष लोकतन्त्रको अभ्यास गरिएन । दलगत स्वार्थमा रमाइरहेका दल र तिनका नेताहरू नसुध्रिएसम्म मुलुक र मुलुकवासीको हित सम्भव छैन ।
स्टार ईन्टरनेशनल अवार्डको दोश्रो संस्करण नेपालमै
विश्व बक्सिङ च्याम्पियनसिपमा प्रतिस्पर्धा गर्ने टोलीको बिदाइ कार्यक्रममा खेलाडी नै अनुपस्थित
नयाँ ‘देउसि रे’ गित सार्वजनिक (भिडियो)
कार्तिक १५ गते ‘एएनपी नेशनल अवार्डस–२०२१’आयोजना हुदै
टिभी टुडेकी प्रमुख कार्यकारी निर्माता बिना नन्दिनी हर्बलको ब्राण्ड एम्बेस्डर
बिभिन्न क्षेत्रका ब्यक्तित्वहरु ‘राष्ट्रिय मानार्थ सम्मान २०७८’ बाट सम्मानित
गृह मन्त्रालयले गर्यो सिडिओ हरु को सरुवा , हेर्नुहोस् सुची सहित
दसैमा खानपान र स्वास्थ्य मापदण्डमा ख्याल गरौं
संचारकर्मी समिर लामाको दशै तिहार गीत ‘रातो टीका’ गीतको भिडियो सार्बजनिक(भिडियो)
प्राध्यापक डा. बालचन्द्र लुइटेल काठमाडौं विश्वविद्यालयको शिक्षासंकायमा डीन नियुक्त
राजनीतिक ध्रुवीकरणका बीच सरकारले पायो पूर्णता
‘पिम नेपाल फिल्म फेस्टिवल’मा शितल के.सी. सर्वोत्कृष्ट चलचित्र नायक
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले राजदूतमा पनि भाग खोजे
नयाँ घरमा दसैं मनाउने पहिरोपीडितको सपना अधुरै
नायिका पूर्णिमाको “हिरोज” चैत्र २३ मा प्रदर्शनमा आउने
रिवनको “नेपालस् फेस अफ दि इयर” सहित “मिस टिन अफ दि इयर २०१७” सम्पन्न
आईएलटीएस परीक्षाको प्रश्नपत्र परीक्षा अगावै किनबेच भएको प्रमाणित
शान्ताको प्रमुख भूमिका रहेको प्रतिक्षित चलचित्र “हिमालकी रानी”को च्यारिटी शो आगामी कार्तिक २७ गते
बाल गायिका नन्दिताको एकल गिती एल्बम ‘नन्दिता गुनगुन’को विमोचन
१० वर्षीया बालिका आफ्नै साथीबाट बलात्कृत
कसरी गर्ने सुरक्षित र कामोत्तेजक यौन सम्पर्क ? यस्तो छ सन्नी लियोनीको टिप्स !!
नारायणगढ-मुग्लिन सडकखण्डमा पहिरो खसेपछि बिहानदेखि सडक खण्ड अवरुद्ध
गुमनाम भएकी छिन् रानु मण्डल
सुरेन्द्र थापाको प्रस्तुतिमा लघु चलचित्र ‘छोरी’ सार्वजनिक(भिडियो)
बाणिज्य बैंकलाई हानी पुर्याएको आरोपमा २ कर्मचारी पक्राउ
नेपाल आईडलबाट बाहिरीएपछी गगनले यस्तो भिडियो लिएर आए
मिस्टर एण्ड मिस चितवन मोडलको उपाधी राजेश र सृष्टिले हात पारे
नेपालीहरुको अमेरिकी जाने सपना सपनै रहन सक्ने, ट्रम्पको नयां नीतिले पर्न सक्छ असर
पेजेन्ट नेपालको आयोजनामा फाल्गुन १ गते ‘ओसीस स्पा भ्यालेन्टाईन फेशन शो’ हुने